Wax kasta oo ku saabsan Melanotan-II / MT2
1. Melanotan-II / Dib u eegis MT2
2. Jawaabaha natiijooyinka Melanotan-II
3. Maxay ahayd sababta Melanotan-II loogu caan baxay?
4. Melanotan-II ma leedahay khatar kasta?
5. Sidee ayaan u qaadan karaa qiyaasta Melanotan-II macquul ah?
6. La wadaago khayraadka Melanotan-II ee lagu kalsoon yahay
Melanotan II, Alfa-Melanocyte hormoonka kicinta, Melanotan peptid, ama MSH waa nooc kala duwan oo dabiiciga ah ee hormoonka dabiiciga ah ee peptide kaas oo mas'uul ka ah melanogenesis (habka keena maqaarka maqaarka) ee jirka.
Horumarinta hormoonka ah ee loo yaqaan 'peptide hormone' ayaa la isticmaalaa si loo hubiyo istaandarka galmada iyo in uu hoos u dhigo midabka maqaarka. Daawada ayaa ka mid ah peptides sharciga ah ee iibka, oo lagu iibiyey foomka budada ah oo dib loo habeeyay loogu talaalay irbado subcutaneous ah.
Melanotan II waxaa markii hore lagu hormariyay 1990s ee Jaamacadda Arizona. Kooxaha cilmi-baarista ee cilmi-baarista ah ee loo yaqaan 'dermatologist Norman Levine, oo ah cilmi-baaris ku salaysan daroogada ayaa loo adeegsaday rahmadda loo isticmaalo tijaabinta waxtarka iyo amniga hoormoonka loo yaqaan' Alpha MSH 'ka hor inta aan loo adeegsan dadka. Hormoonka ayaa sababay mugdiga muraayadaha roogga loo isticmaalo tijaabada.
Marka la xaqiijiyo waxtarka Alpha MSH ee mugdiga madoowga maqaarka ah, waxay beddeleen Melanotan II peptide qaab u noqon lahaa mid saaxiibtinimo jidhka bini'aadamka oo ay ku maraan tijaabooyinka kiliinikada. Intii lagu jiray baaritaannada, mid ka mid ah dadka qaatay daroogada ayaa u sheegay Levine in uu la kulmay kacdoono isdaba joog ah oo ka dhalatay.
Ka dib warbixinnada noocaas ah, kooxda cilmi baarista waxay sidoo kale ku guuleysteen guusha kale illaa inta laga helayo Faa'iidooyinka Melanotan-II waxay ka walaacsan tahay helitaanka Bremelanotide (PT-141), oo ah aasaaska diirada saaraya dawada. Labada Melanotan II peptide iyo Bremelanotide waxay leeyihiin rukhsad shati iyo ruqsad u leh iibinta iyo u adeegsiga shirkadaha bayoolaji xagga horumarka suurtagalka ah ee dawooyinka loo qoro.
Melanotan II waxay ka shaqeysaa dhaqdhaqaaqa maqaarka melanokortin, taasoo keentay kor u kaca maqaarka, kordhinta libido galmada, dheef-shiid kiimikaad hooseeya iyo cunto xumo. Daraasad la sameeyay si loo baaro saamaynta Melanotan 2 ee ku saabsan qaadashada cuntada, waxaa la ogaaday in hoormoonka peptide uu dhaqdhaqaaqa melanokortin (MC) marka la quudiyo oo lagu quudiyo jiirarka.
Jiirarka loo isticmaalay tijaabada ayaa hoos u dhigay miisaanka jidhka iyo unugyada viscera adipose ka dib markii daaweynta lixda maalmood ah la qaato melanotan peptide. Sidoo kale, walaxda ayaa keentay in la ciribtiro isticmaalka qaadashada kaluunka ee jadeecada.
Natiijooyinka waa calaamad muujinaysa in Melanotan peptide ay caawin karto dadka doonaya in ay daadiyaan miisaanka qaarkood, gaar ahaan cayilka iyo miisaanka, si loo yareeyo karbohidratka iyo kalooriyada.
2. Melanotan-II Jawaabcelinta natiijooyinka: Melanotan-II kahor iyo kadib
Haatan waxaan eegnaa Melanotan-II dib u eegis ay bixiyeen dadka isticmaala MT2 (121062-08-6).
Tammy: Shaqadaydu waxay ku lug leedahay wakhtiyo badan oo dibedda ah iyo marmar, waxaan la kulmay sunburns culus. Anigu aad baan ugu rafaadsanahay maqaarkayga dhaawacan oo aan isku dayay wax kasta oo sheyga sheeganaya in ay bixiyaan difaaca qorraxda laakiin midkoodna ma i siiyay natiijooyinka aan doonayo. Markii ugu dambeyntii la ii soo bandhigay MT2 natiijooyinkana waa la yaabay. Haatan waxaan leeyahay caado aan ahayn qurux oo kaliya laakiin sidoo kale waxay u adkeysan kartaa waxyeelada sunta ah.
Chris: Dabcan, waxaan ahay boodhka biyaha madow oo leh maqaar aad u iftiin ah iyo jajabyo. Si kastaba ha noqotee, inkastoo aan raali galin ka ahaa muuqaalkeyga iyo jaahwareerka sare ee sunta waxyeelada, waxaan aad ugu qanacsanahay isticmaalka alaabooyinka tanning. Hal maalin, waxaan go'aansaday in aan wajaho madaxa arrinta! Dhamaantiis, noloshu waa mid aad u gaaban si ay ugu noolaato dareemid la'aanta. Waxaan go'aansaday inay ahayd waqtigii loogu talagalay Melanotan iibsato oo waxay u baxday sidii maalin kaamil ah. Tani waa mid ka mid ah go'aamadii ugu fiicnaa ee aan abid sameeyey noloshayda oo dhan. Sheeg waxa waxa ..! Waxaan helay mugdi madow oo madow ka dib markii qiyaastii lix sariirood oo sariirood ah. Waan rumaysan kari waayay. Waxaan u adeegsan jiray diin ahaanba tan iyo tan iyo wax qoomamo ah.
Laura: Kaliya waan jeclahay sheygan. Dhammaan peptides sharci ee iibka ah ee aan waligay isticmaalay, waxaa kaliya Melanotan-II oo i siiyay dhab ahaantii waxa aan raadinayay - tan tan madow iyo muddo dheer. Toddobaadkiiba hal mar iyo natiijada, waxaan kufaraxsanahay maqaarkayga cajiibka ah. Fasauracetam ee loo yaqaan 'Nootropic Fascatam': Maxay noo siisaa?
Si ka duwan sidii hore xitaa marka xitaa aan qorraxdu soo gaadhin xiitaa ka dib markii qorraxdu soo gaarto, hadda maqaarkaydu waa mid u adkaysata arrimahaas. Dhibaatada kaliya ee Melanotan-II ah ee aan la kulmay waa lalabo inta lagu jiro maalmaha bilowga ee isticmaalka, laakiin arrintu way baxday. Haddii aad tahay caddaan qof cad oo jeclaan lahaa in uu helo saldhig wanaagsan, waxaan kugula talin lahaa inaad tijaabiso badeecadan.
Mercy L: Waxaan marwalba arkay gabdhaha mugdiga tan madow ka qurux badan. Waxaan ka baqayay in aan isticmaalo waxyaabaha qaar ka mid ah alaabta lagu iibiyo suuqa sababtoo ah waxaa jiray dhacdooyin badan oo la soo sheegay oo ah dhibaatooyin halis ah. Waxaan ku dhiiraday inaan isticmaalo MT2 ka dib markaan arko sida ay u bedeshay mid ka mid ah saaxiibaday.
Markii aan bilaabay in aan isticmaalo, waxaan la yaabay inaan ogaado in Melanotan-II cirbadaha aan ahayn xanuun sida aan u maleeyay sida cirbadda loo isticmaalo waa mid aad u yar. Waxaan isku duraa nafxad 1 ee daawada hoormoonka ee caloosha labadii maalinba mar waxaanan dareemayaa xanuunka iinta. Si aan u gooyo sheekada dheer ee gaaban, waxaan jeclahay wax walba oo ku saabsan badeecadan, maxaa yeelay waxay siisay maqaarkayga riyadeyda tan. Sidaan oo kale, waan ku faraxsanahay inaan ogaado in aan tallaabo ka qaadey kansarka maqaarka.
Salome Clinton: Inaad ka soo jeedo Irish, maqaarkayga dabiiciyan waa caddaan. Ka hor inta aan la ogaanin isticmaalka Melanotan Peptide, waxaan la kulmay sunburns halis ah xagaaga. Hase yeeshee, wax badan ayaa isbeddelay markii ay fiicnayeen waqtigii aan bilaabay in aan qaato irbadaha Melanotan-II. Tan tan Melanotan-II ka hor iyo ka dibba waa isku mid. Anigu kama baqayo gabayada maxaa yeelay badeecadaani waxay u bixisaa maqaarkayga ilaalinta ay u baahan tahay inaan sii wadin ilaa sannadka oo dhan. Waa shey aan anigu si toos ah ugu talin karo dadka kale oo doonaya in ay ku daraan tan tayo fiican leh maqaarkooda.
Tony: Sheekadayda waa mid xiiso leh. Marka aan soo noqdo 40, libido yaraydu si aad ah ayey hoos u dhacday, malaha sababtoo ah nooca shaqada aan bilaabay. Waxaan ku qaatay qayb wanaagsan oo ka mid ah waqtigaygii, tani waxay keentay dhaawac aad u daran maqaarkayga sababtoo ah xad-dhaaf ku salaysan shucaaca UV.
Intii aan internetka ku fuulayay, waxaan ku booday boostada ku saabsan faa'iidooyinka Melanotan-II. Waxaan la yaabay in aan ogaado in ay jirto daroogo oo hagaajin kara libido waxaanan siinayaa maqaarkayga UV ilaalinta.
Markaan isticmaalay badeecada bilaha 10, waxaan si kalsooni leh u sheegi karaa waxtarkeeda labada awoodba. Xaaskeyga iyo waxaan ku raaxeeyaa jacaylka sidaanu u sameynay jimicsiyadii hore markii aan guursanayana maqaarkayduna aad u madow yahay. Anigu mar dambe ma dareemo qorrax-xummo iyada oo aan loo eegin muddada dheer ee aan qorraxda u soo gaadhay.
Sandra: Yeee! Hadda waxaan ku riyaaqi karaa fasaxyada aan ku hayo xeebta iyaga oo aan ka baqeynin qorraxda, iyada oo ay uga mahadcelineyso natiijooyinka Melanotan-II. Tani waa wax aanan marnaba ku riyaaqin sannado badan sababtoo ah qorraxdu waxay ahayd mid aad u daacad ah maqaashayda aan jeclahay.
Anigu kuma mahadnaqi karo qofkii ku soo baxay sheygan. Ka sokow maqaarkayga oo eegaya madow iyo jidhkeenu waa qaab wanaagsan. Waxaan iska daayay miisaanka qaar muddadii aan isticmaalayey daroogada. Aad ayaan u faraxsanahay.
Raphael: Haddii aad leedahay maqaar cad oo aad u malaynayso in aad si fiican u fahmeyso markaan idhaahdo qiyaasta waxyeelada qorraxda kuu keeni karta. tan iyo markii aan caruurnimadey sanad ka hor markii aan ogaaday MT2, waxaan isku dayey inaan isku dayo inta aan awoodi karo in aan ka fogaado qorraxda iyo waxa loo adeegsanayo 50 + badbaadinta UV, laakiin taasi wax badan ma caawin.
Inkasta oo ay taasi jirto, marxalad gaar ah, gaar ahaan xilliga kuleylaha, si xun ayaan u gubi lahaa qorraxda qorraxda. Sannadkii hore waxaan ogaaday wax ku saabsan Melanotan peptide waxaanan ku faraxsanahay in aan soo sheego in walxadani i siisay naftayda. Waxay ii noqdeen naxaas maalmo yar oo la isticmaalayo.
Waxaan maqlay dadka qaarkood inay ka cabanayaan waxyeelada Melanotan-II laakiin marnaba ma aysan arkin wixii ka baxsan libido kordhiyay taas oo aniga ii ah. Hadda waxaan ku raaxaysan karaa dhammaan waxqabadyada dibadda xitaa inta lagu jiro xilliga qorraxdu ay kuleyl u kulushahay maxaa yeelay maqaarkayga si fiican ayaa looga ilaaliyaa waxyeelada iman karta.
Khalid: Waxaan mar walba isticmaalaa Melanotan-II ka hor iyo ka dib qorraxda qorraxda dheer waxayna u adeegtaa sixir. Dadka i garanayaa waxay fahmi karaan sida haraygii haray ee loo isticmaali jiray xilliga xagaaga sababtoo ah waxyeelada qorraxda, laakiin hadda waa wax la soo dhaafay.
Anigu waxaan ku dhajin doonaa maqaarka madow ee madow (taas oo hore ahayd mid aad u cirro leh). Ka sokow, waxaan ogaaday in libido-kayga uu kor u kacay iyo xaaska / saygeyga dambe kama cabanayo qanacsanaanta galmada. Waxaan si xoogan ugu talagalay alaabta.
3. Maxay ahayd sababta Melanotan-II loogu caan baxay? / Melanotan-II faa'iidooyinka
Inkastoo dadka qaar ay isku dayaan in ay iibiyaan peptide iibinta, gaar ahaan Melanotan-II, oo dadka kala diri karaan iyaga oo isticmaalaya, dadka intooda ugu badan ee aan lahayn maqaarka iyo haysashada supplementa Melanotan ma xasilin karaan. Waxay ku qanacsan yihiin natiijooyinka Melanotan-II waxayna sii wadaan inay kugula taliyaan daroogada dadka kale. Natiijo ahaan, caan bixinta Melanotan ayaa sii kordhisa maalin kasta.
Warbixin ay soo saartay BBC ee 2009 ayaa tilmaamey in boqollaal dad ah ay lix jeer isdhaafsadeen mudo dhawr bilood ah si ay u helaan siriin loogu talagalay maamulka saxda ah Qiyaasta Melanotan. 2010, Farmashiyeyaasha Noorweey ayaa soo wariyay in kumanaan siriin oo loo siiyay dadka raba Melanotan-II irbadaha. Faa'iidooyinka Melanotan-II ee ugu weyn waxaa ka mid ah maqaarka madow, kor u kaca libido iyo dufan la'aan.
★ Maqa madow
Haysashada maqaarka cad waa mid aan loo baahnayn in dad badani jecel yihiin sida cagaarshowga ay u nugul yihiin sunburn iyo kansarka maqaarka. Nasiib wanaag, xitaa haddii aad ku dhalatay maqaarka cirridka, waxaad ku dari kartaa qaar ka mid ah tan tan adigoo qaadanaya daroogo lagu kalsoonaan karo si kor loogu qaado wax soo saarka maqaarka-madow. Xaaladdan oo kale, natiijooyinka Melanotan-II waa kuwo aan la isku haleyn karin.
Jawaabta Verdens, wargeys Norway ah, oo ku saabsan in ay isticmaashay irbadaha Melanotan-II, Linn Connie Danielsen ayaan ka dhaadhicin erayada ku saabsan maqaarka madan ee Melanotan. Waxay sheegtay in daroogada hoormoonku ay siiso qoto dheer oo muddo dheer ah tan iyo sannadka oo dhan iyo inay aad ugu faantay inay eegto. Waxay intaas ku dartay in daroogada hormoonku ay saameyn ku yeelatay saameynta walaaca ee qulqulka qorraxda badan ee xilliga qaboobaha.
Waxaa jira saddex saameyn oo saameyn ah Melanotan-II, laakiin midda ugu weyn waa awoodda lagu yaqaannaan nooc kasta oo ah maqaarku, iyada oo aan loo eegin inta qof ee jira.
Haddii aadan ku qanacsanayn maqaarka cad ee maqaarka cad oo aad jeclaan lahayd in aad siiso dhuxul dheeri ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato nooca maqaarka sida waafaqsan cabirka Fitzpatrick ka hor intaadan bilaabin safarka si aad u hesho maqaarka madanotan. Ogaanshaha nooca maqaarkaaga ayaa kaa caawineysa sameynta qiyaasaha Melanotan ee ugu habboon ee nooca maqaarkaaga gaarka ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado dadka ku jira qiyaasta sare ee Fitzpatrick (gaar ahaan noocyada 1, 2 iyo 3) kuwa ay u badan tahay inay u helaan ugu wanaagsan uguna fududaadaan maqaarka Madanotan madow waqtiga ugu gaaban marka la barbardhigo inta kale .
Haddii maqaarkaaga uu leeyahay midab yar oo midab leh oo khafiif ah (lakabyo), saameynta Melanotan-II wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho isku-dhafnaan isku-dhafan oo qarsoodi ah haddii aad qaadato daawada haboon. Waqtiga oo dhan, waxaad arki doontaa jilbaha iyo inta kale ee maqaarka ayaa ka sii madow. Ugu dambeyntiina, waxaad yeelan doontaa midabka maqaarkaaga.
Waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in Melanotan maqaarka madow Saameyntu waxay soconeysaa wakhti dheer marka la barbardhigo tan caadiga ah. Dabcan, marka aad la kulantid iftiinka qorraxda, maqaarkaaga maqaarku wuu ka sii madnuucsan yahay wax soo saarka melanin si loo ilaaliyo lakabka hoostiisa hoostiisa (hypodermis) laga yaabo inuu ka yimaado iftiinka qoraxda. Sidaa darteed, tani waxay u dhaqantaa sidii gaashaan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay maqaarka cad, waxaad ogaan doontaa in maqaarkaagu uu lumiyo tan tan keentay inuu soo gaadho qorraxda qoraxda waxay socotaa oo keliya dhowr toddobaad, badanaaba hal ama laba, markaad joojiso in aad la kulanto nalka qorraxda. Dhammaan ka dib, maqaarka uma baahna inuu soo saaro difaac dheeraad ah (melanin) maadaama aysan jirin qoraxyo si ay u waxyeeleeyaan. Taas ayaa sharraxaysa sababta aad u noqotid caddaan / iftiin xilliga jiilaalka ama haddii aad inta badan ku jirtid gudaha gudaha.
Dhanka kale, Melanotan maqaarka madow ee ka yimaada tan peptides tan caadiga ah waxay ku dhamaaneysaa mudo ka badan tan tan dabiiciga ah. Badanaa waxay socotaa bilo mar markaad joojiso inaad soo gaadhsiiso qorraxda qorraxda. Melanotan iibsashada iyo isticmaalka waa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad joogtid qurux leh maqaarka si wanaagsan udoonaya iyada oo aan loo eegin xilli-xiga.
Sida hore u xusan, maqaarka cad oo cirridka ah ayaa aad u nugul kansarka marka loo eego mid wanaagsan. Iyadoo la tixgelinayo halista, ujeeddada bilawga ah ee lagu abuurayo Melanotan II waxay ahayd in laga hortago ama la yareeyo khatarta kansarka maqaarka iyada oo kor u qaadeysa kororka wax soo saarka melanin. Saameynta ciriiriga ee samaflutide Kaliya sida Peptide? MAYA, wax badan oo ka badan!
Sida peptide kale ee iibka ah ee iibka, marka aad qaadato supplement Melanotan, waxay kicisaa jirkaaga si ay u soo saaraan melanin heer sare oo ka badan heer caadi ah. Maaddaama melanin uu yahay midka ugu weyn ee midabka maqaarkaaga ah, waxa uu kordhay waxsoosaarku wuxuu keenayaa maqaarka madow.
Dadka badankood ee jilicsan ee jilicsan ayaa dabiiciga ah aan heli karin maqaarka kaas oo madow ka ah midab casaan leh. Taasi waa xaqiiqo! Haddii ay iloobaan in ay ka madhxiyaan midaas?
Sababtoo ah Melanotan II, waxay maqaarkooda u noqon karaan madow sida ugu macquulsan!
Natiijada hawshan, Melanotan II waxay si wax ku ool ah u ilaalin kartaa maqaarkaaga waxyeellada soo gaarta waxayna yareyneysaa halista kansarka.
★ Lafdhabarta horumarka
Markay tahay arrimaha galmada, sida uur la'aanta, dadka qaarkiis waxay doorbidaan inay iyagu iskood u xalliyaan halkii ay u tagi lahaayeen takhtar si looga fogaado inay dareemaan xishood. Kuwo kale ayaa aan caymis ku jirin ama aan ku filnayn caymis ay ku heli karaan adeegyadan caafimaad ee taranka.
Xaaladaha noocaas ah, daawo xoojinta waxqabadka galmada oo aan daruuri u baahnayn warqad dhakhtar ayaa ku imaanaysa si fiican. Awoodda hagaajinta unugyada ee 'Melanotan' waa mid sixiroola ah.
Ka sokow bixinta natiijooyinka maqaarka dabiiciga ah, Melanotan 2 ayaa sidoo kale kor u qaada kacsanaanta galmada (libido). Ragga iyo dumarka doonaya inay nolol galmo ka helaan lammaanahooda ayaa isticmaali kara dawadan. Waxay ragga siisaa dhibaato ka timaada kacsi kacsi iyo xoojin iyo isu-duwidda galmada ee haweenka.
Waa dawo uu nin qaba cilladdu ku tiirsanaan karto farax galmood uu awoodi karo. Taasi waxay si buuxda u sharraxaysaa sababta Melanotan daaweynta dysfunction Faa'idadu waa mid aad u caan ah oo ka mid ah qaybaha hoose ee sida "murqada gogosha".
Marka lagu daro kordhinta tayada koritaanka qof, Melanotan supplement ayaa sidoo kale siin kara isaga oo ku raaxeysta badan oo kaabayaal by yaraynta waqtiga xasaasiga ah. Sidaa darteed, haddii aad rabto jacayl ka fiican iyo maqaar weyn oo u nugul kansarka maqaarka iyo qorraxda gubashada, iyadoo la isticmaalayo Melanotan II waxay la mid tahay dilida laba shimbir iyada oo la isticmaalayo hal dhagax.
Si kastaba ha ahaatee, ujeedada ugu muhiimsan ee Melanotan 2 waa maqaarka maqaarka iyo sidaas darteed, qof kasta oo isticmaala, wuxuu la kulmi doonaa isbeddel ku yimaada arooska galmada. Xaaladda meesha daroogadu ay saameyn ku leedahay kacsiga galmada, qofka ayaa u badan inuu dareemo saameynta 1 in saacadaha 3 kadib qiyaasta. Saameyntu waxay inta badan ku socotaa 2 ilaa saacadaha 4.
Haddii aadan rabin in aad la kulanto saameynta dhexdhexaadinta Melanotan 2, qaado daroogada intaadan sariirta aadin. Marka sidaas oo kale, inta daroogada ay dhalinayso jidhkaaga si aad u kiciso rabitaanka galmada, maskaxdaadu waxay noqon doontaa mid aad u liidata si ay u hirgeliso tallaabada loo baahan yahay iyo markaa, ma dareemaysid kacsanaan. Haddii kale, waxaad sugi kartaa saameynta oo aad waqti wanaagsan ku haysato jacaylkaaga.
★ Melanotan-II lumis fatu
Marka laga reebo libido kordhay, saameyn kale oo dhexdhexaad ah oo ah M2 waa dufan la'aan.
Tijaabooyinka Melanotan II ee lagu sameeyay jiirarka, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in jiirarka la siiyay daroogada inta lagu guda jiro daraasaddan uu lahaa tiro yar oo ah unugyada dufanka nudaha iyo subcutaneous dhamaadka xilliga imtixaanka marka la barbar dhigo sida ay ahaayeen ka hor maamulka daroogada. Tani waa caddeyn cad Melanotan-II lumis fatu awoodda.
Sidaa darteed, haddii aad tahay sheygan oo aadan ku raaxeysanayn miisaankaaga, saameynta luminta Melanotan-II waxay kaa tagi doontaa inaad ku ruxayso qaab caafimaad leh oo qurux badan. Qiimaha Melanotan-II wuxuu xaqiiqo u leeyahay faa'iidooyinka aad ka heshay daawada illaa iyo inta ay ka timaaddo ilaha Melanotan-II.
Melanotan II waxay joojisaa rabitaankaaga cuntada, taasina waa hal dariiqo ah oo kaa caawinaysa inaad lumiso. Sidaa daraadeed, haddii aad qaadatid daroogada, waxaad u maleyneysaa inaad cunayso wax ka yar intii laguu adeegsanayay iyo tanina waxay caawineysaa in si aad ah loola yaraato. Waxay kaa caawinaysaa inaad ka fogaato rabitaan aan loo baahnayn oo aad ku dhajiso cuntadaada adigoon wax dhibaato aheyn
Marka labaad, awoodda Melanotan II si loo yareeyo raasamaalka xorta ah ee bilaashka ah ee miisaan korodhka ayaa la cadeeyay. Waa hab kale oo M2 ay suurtogal u tahay inay kaa caawiso inaad yareyso miisaanka jidhkaaga.
Waa hagaag, ma jiraan wax saameyn ah oo muddo dheer Melanotan-II ah oo waligood la soo sheegay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaadey in dadka qaarkood ay u badan tahay in ay la kulmaan waxoogaa saameyn ah cirbadeynta maqaarka inta lagu jiro mudada yar ee Melanotan ah. Saameynaha Melanotan-II ee ugu caansan waxaa ka mid ah lallabbada khafiifka ah iyo booga kulul ee wajiga.
Nasiib wanaag, waxyaabahan aan la dooneynin waxay u badan tahay inay u noqdaan kuwo khafiif ah waqti la mid ah marka jidhkaagu ku xakameeyo peptide.
Haddii ay dhacdo inaad la kulanto lallabo aad u xanuun badan oo ka timaadda melanotan ka dib, bedel waqtigaada daaweyntaada illaa dhowr daqiiqo ka hor sariirta. Haddii aysan taasi waxba ka tarin, waxaad qaadan kartaa badeecada dhabta ah ee anti-histamine saacad kahor qaadashada Melanotan II illaa jidhkaaga loo isticmaalo peptide. Haddii aad rabto anti-histamine dabiiciga ah, waxaad ku geli kartaa khaladka xididka.
Fursad kale oo laxiriirta natiijooyinka Melanotan-II ee aan loo baahneyn waxay kala qaybinaysaa qiyaastaada hadda ee qiyaasta yaryar. Tusaale ahaan, haddii aad qaadato qiyaasta 1mg, waxaad u kala qaybin kartaa laba qiyaasood oo 0.5mg ah waxayna qaadan kartaa wakhti u dhaxeeya. Waxaa muhiim ah in la ogaado in saamaynta daawadu ay kordhayso qiyaasta; qiyaasta sareeya, waxay ka sii daran tahay saameynta.
Waxaa lagugula talinayaa in aad hubiso in ilaha Melanotan-II uu yahay mid dhab ah ka hor inta aadan iibsan peptide maaddaama ay jiraan alaab-bixiyeyaasha Melanotan-II badan. Marka aad sidaas samaynayso, waad hubi doontaa in aad isticmaasho daroogada dhabta ah, ma aha wax laga yaabo inay soo afjarto waxyeelo ka badan ta wanaagsan jidhkaaga.
▲ Wajiga wajiga
Cabbiraadda wajiga waxay ku dhacdaa daqiiqadaha 10 ee qaadashada Melanotan II laakiin waxay socotaa waqti gaaban, caadi ahaan wax ka yar saacad. Hase yeeshee, waa inaadan walwal gelin haddii aad la kulanto sida saamaynta xun ee ay u badan tahay inay tagaan kuwa soo socda Melanotan-II irbado marka jirkaaga la isticmaalo daroogada.
▲ Nabar maqaarka, is-dhaafsi iyo faafis
Iyadoo la tixgelinayo in ay jiraan alaab-bixiyeyaasha Melanotan-II ee kala duwan, waa mid aad u sahlan in lagu iibsado melanotan. Culeysku wuxuu yimaadaa marka aadan helin tilmaamo ku habboon oo amaan ah sida loo maamulo daroogada ama haddii aad ku guul daraysato inaad raacdo warqadda.
Melanotan 121062-08-6 waxay ku timaadaa foomka budada waxaana loo maleynayaa in lagu soo celiyo biyo nadiif ah ka hor inta aan la isku durin. Sidaa daraadeed, haddii aan la isticmaalin biyaha nadiifka ah, daroogada la isku duro ayaa laga yaabaa in ay sumoobeen waxayna tani keeni kartaa arrimaha caafimaadka qaarkood sida infekshanka.
Ka sokow, siriinjka loo isticmaalo waa inuu ahaadaa nadiif ah oo la nadiifiyo, haddii kale iskutalaabid-faddar ama caabuq ayaa dhici karta qofka qofka qaata daroogada. Sidoo kale, haddii maamulka maandooriyaha aan laga sameynin qof khibrad leh, waxay keeni kartaa nabar maqaarka ah.
Waxyeellooyinka kale ee caadiga ah ee saameynta Melanotan-II waxaa ka mid ah:
Caadi ahaan, saameyntan soo socota waxay u egtahay natiijada qiyaasta tallaalka. Sidaa darteed, mid ka mid ah doorashooyinka si loo yareeyo ama looga fogaado waa in la doorto qadar yar.
Sidoo kale, waxaa jira waxyeelo soo noqnoqda Melanotan-II inta lagu jiro tijaabooyinka dheeraadka ah waxayna ku jiraan lafaha badan, mugdiga oo madooba iyo mugdiga mugdiga ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aad hesho natiijooyinka ugu wanaagsan Melanotan; waa inaad isticmaashaa Melanotan-II sidii daaweyn joogto ah. Qiyaasta bilawga ah waa in lagu raaco qiyaasaha Melanotan oo dheeraad ah ujeedada dayactirka illaa aad ka hesho codka maqaarkaaga.
Ka sokow, waa inaad hubisaa inaadan wax badan qaadin ama aad u yar tahay daroogada. Kaliya ku mudo qadar macquul ah.
Iyadoo la tixgelinayo in MT2 yimaado sida barafka la qalajiyey budada hawada, maro badan oo la isticmaalo, waa inaad awood u yeelatid in si sax ah loo saxo saamiga saxda ah ee biyo nadiif ah ka hor inta aadan maamulin. Melanotan peptide oo loogu talagalay isticmaalka shakhsiyeed waxaa lagu iibiyaa 10mg oo ku jirta weelka 3ml waana in lagu qasi karaa 1ml ama 2ml biyo nadiif ah.
Haddii aanad hubin kartida kartidaada dib-u-habeynta peptide si sax ah, waxaad isticmaali kartaa xisaabiyaha Lovemelanotan peptide. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalabka si aad u siisid sheyga si sax ah.
Inkastoo ay jiraan siyaabo kala duwan oo loo maamulo Melanotan-II 121062-08-6 oo ay ku jiraan buufinta (buufinta sanka) iyo liqidda (kiniinada dheellitirka Melanotan), iyo duritaanka, ugu dambeeya (duritaanka) ayaa ugu fiican. Maaddooyinka peptide ee ku jira buufinta Melanotan peptide aad bay u weyn yihiin, sidaas awgeed way adagtahay in la geliyo xuubka sanka.
Taasi way ka duwan tahay habka cirbadeynta ee xaddiga nuugista daroogada waa 100%. Marka ay timaado kaniiniyada, iyagu sidoo kale ma noqon karaan kuwo wax ku ool ah sida cirbadaha sababta oo ah enzymes ee caloosha taasoo ka dhigaysa peptide ka yar firfircoon. Cabbiraadaha SARM ee ugu Sarreeya 10: SR9009 (1379686-30-2)
Haddii ay tahay markii ugu horeysey isticmaal melanotan 2, waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo meel aad u hooseeya, oo la doorbido meel kasta oo ka mid ah 50 mcg ilaa xNUMX mcg ka dibna kordha si tartiib tartiib ah halkaa ka dib marka aad qiimeyso sida jidhkaaga uga jawaabaayo. Sidii hore loo soo sheegay, bilaabista qadar sarreeya waxay kordhineysaa fursadaada inaad la kulanto dhibaatada Melanotan-II sida lalabbo.
Sidoo kale, isku day inaad sameyso kal-fadhiyeyaasha caleenta sida fadhiyada gaaban sida gaaban ama laba jeer haddii ay lagama maarmaan tahay maalmaha ugu horeeya, ka dib markii Melanotan iibsato midab wacan. Sababtoo ah sababaha maqaarka muddo dheer marka maqaarkaaga uu leeyahay melanin yar oo yar wuxuu kordhin doonaa khatarta hurdo iyo gubasho. Maaddaama maadada melanin ay kordheyso maqaarka Madanotan madow, maqaarku wuxuu noqonayaa mid la ilaaliyo in ay noqon doonto mid u nugul duufaan iyo gubasho.
Markaad dib u dhisto MT2 si aad u hesho feejignaanta saxda ah, hadda waa waqtigii loo maareyn lahaa, waxqabadka aad sameyneysid adiga oo isticmaalaya sirinjeerka insulin. Mid ka mid ah wax aad ka ogaan karto sirinjaha waa in uunan ahayn mid aan yareyn, laakiin qalabka IU (Internation Units). Haddii loo isticmaalo ml, 100 IU waxay u dhigantaa 1 ML. sidaas darteed, haddii aad rabto inaad maamusho 0.3mls, waxaad cabbiri doontaa daawada ilaa 30 IU ku calaamadee cirbadda.
Aynu hadda aragno sida loo baahan yahay in la sameeyo.
Waxaad isku duri kartaa melanotan peptide hoosta maqaarka (subcutaneous) ama muruqyada (hurgumada); meelkasta oo aad ku raaxeysan kartid jirkaada. Maqaarka haragga ka soo saar muruqa oo kor u qaad si aad ugu oggolaato irbadta inay gasho lakabka lafaha ee maqaarka. MT2 ayaa markaa ka dibna u galaa dhiiga wuxuuna ku fidaa si siman oo dhan jirkaada.
Sida ay tahay kiiska kale ee peptides sharci ee iibka, waxaa jira alaab-bixiyeyaasha Melanotan-II online iyo offline. Laakiin dhammaantood ma iibiyaan alaabo dhab ah waxayna isticmaalaan qiimaha Melanotan-II midigteeda qiimaha? Jawaabtu waa maya.
Qaar ka mid ah alaabooyinka Melanotan-II ee iibiya melanotan-II qiimo jaban oo qiimo jaban si ay u sameeyaan iibka peptides weyn ee kharashka qiimaha macaamiisha waa in ay ka helaan lacagta.
Sidaa darted, waxaa muhiim ah in aad sameyso dadaal badan kahor intaanad dooran ilaha Melanotan-II. Si kastaba ha noqotee, maadaama laga yaabo inaadan haysan waqti oo aad si qoto dheer u qodo si aad u kala soocdo jumlada iyo kuwa iibiyaasha dhabta ah, waxaan jeclaan lahayn inaan kaa badbaadino dhibaatada adiga oo kuu soo bandhigaya Phcooker.com.
Phcooker.com ayaa ka mid ah kuwa ugu kalsoon yahay Bixiyeyaasha Melanotan-II. Haddii aad rabto inaad ka iibsato Melanotan-II (121062-08-6) oo aan laheyn wax lacag la'aan ah, ilaha Melanotan-II waa aad daboolay. Ka sokow, tani waa meesha ugu fiican Melanotan-II ee kharashka Melanotan-II ugu tartameysa.
Wessells, H., Levine, N., Hadley, ME, Dorr, R., & Hruby, V. (2000). Melonocortin agonists, dhirta galmada, iyo dhiirigelinta galmada: daraasaadka aadanaha ee Melanotan II. Diiwaanka caalamiga ah ee cilmi-baaris la'aanta, 12(S4), S74.
Evans-Brown, M., Dawson, RT, Chandler, M., & McVeigh, J. (2009). Isticmaalka melanotan I iyo II ee dadweynaha guud.
Nelson, Me, Bryant, SM, & Aks, SE (2012). Melanotan II cirridka oo keena sunta shucaaca iyo rhabdomyolysis. Xinjirnimada Xanuunka, 50(10), 1169-1173.
Heijboer, AC, Van Den Hoek, AM, Pijl, H., Voshol, PJ, Havekes, LM, Romijn, JA, & Corssmit, EP (2005). Maamulaha "intracerebroventricular of melanotan II" wuxuu kordhiyaa dareemaha insulin ee guluukoosta ee jiirka. Diabetologia, 48(8), 1621-1626.
Breindahl, T., Evans-Brown, M., Hindersson, P., McVeigh, J., Bellis, M., Stensballe, A., & Kimergård, A. (2015). Aqoonsiga iyo dabeecadda LC-UV-MS / MS ee melanotan II maqaarka lagu iibiyo si sharci darro ah internetka. Imtixaanka daroogada iyo falanqaynta, 7(2), 164-172.
Li, G., Zhang, Y., Wilsey, JT, & Scarpace, PJ (2004). Jawaab-celin aan caadi aheyn oo la xoojiyey oo ka soo baxday melanotan II ee jiirka cuntooyinka cunta ee lakala yareeyay inkastoo dhimista melanocortin 3 iyo 4. Wargeyska Endocrinology, 182(1), 123-132.
Waxaa i soo jeediyey websaydka inaadeerkay. Ma hubo in qoraalkan uu qoro isaga ma jiro cid kale oo ka ogaata faahfaahinta dhibaatadan. Waxaad tahay cajiib!